5 Su'aalood oo leh Xidhiidhka Qabaa'ilka CHPW - Website-ka rasmiga ah ee CHPW Bogga internetka ee blogga ee rasmiga ah | Awooda bulshada Barta rasmiga ah ee CHPW
Community | Janaayo 4th, 2022
La dhajiyay Janaayo 4th, 2022 - Waqtiga Akhriska: 4 Daqiiqad / s
La kulan Natalie Christopherson, Xidhiidhka Qabiilka ee CHPW.
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) waxaa loo sameeyay si loo helo daryeel dadka aan loogu adeegin ikhtiyaarrada caymiska caafimaadka guud. Maanta, ku dhawaad ​​30 sano oo shaqadan laga joogo, waxaan ognahay in ay wali jiraan wax badan oo kale oo dhiman.
Natalie Christopherson ayaa hogaaminaysa qayb muhiim ah oo ka mid ah dadaalladan, doorka Xidhiidhka Qabaa'ilka.
Xubin ka diiwaan gashan Qaranka Cherokee, booskani aad buu uga badan yahay shaqo aniga - waa a xiriirka dhaqanka, bulshada, iyo saaxiibada. Ahaanshaha Hindi-magaaleed waxay noqon kartaa mid adag, maadaama aan ka fogahay dhulkii hooyo oo aan seegay dhacdooyin iyo dhaqdhaqaaqyo. Barashada xubnaha qabaa'ilka Gobolka Washington waxaan u helay duco, in lagu martiqaado dhulkooda iyo hawlahoodaba waa hadiyad caynkaas ah.
- Natalie Christopherson, Xidhiidhka Qabaa'ilka at Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington
Waxaan waydiinay Natalie dhowr su'aalood si ay bulshadeenu u bartaan iyada iyo shaqadeeda.
Intee in le'eg ayaad ku jirtay CHPW? Waa maxay doorkaada hadda?
Osiyo! ("Hello" gudaha Cherokee.) Waxaan ahay Natalie Christopherson, oo ka socota Qaranka Cherokee ee Oklahoma. Waxaan CHPW kula jiray doorka Xiriirinta Qabiilka ilaa dabayaaqadii 2018.
Maxaad u dooratay inaad ku shaqaysato xirfad daryeel caafimaad?
Sida qaar badan, waxaan doortay xirfad ku saabsan daryeelka caafimaadka si aan u caawiyo kuwa kale. Asalkaygu waa caafimaadka habdhaqanka iyo nidaamka cadaalada ee dhallinta. Xidhiidhiyaha Qabaa'ilka ahaan, waxaan awoodaa inaan sii wado caawinta dadka iyo jaaliyadaha aan la adeegin.
Maxaad ku faraxsan tahay inaad ka shaqeyso CHPW?
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo ballanqaadka CHPW ee horumarinta sinnaanta caafimaadka.
Ka qayb qaadashada shaqada ee bixiyaashayada daryeelka caafimaadka qabiilka ee badan, ma qaadan waqti dheer in la ogaado inay jiraan dad badan faraqa u dhexeeya nidaamka bixinta daryeelka caafimaadka Hindiya ee muddada dheer la aasaasay iyo nidaamka daryeelka la maareeyay. Waa maahmaahdii hore, “Biin laba jibbaaran oo dalool wareeg ah ku yaal.”
CHPW waxay qaadatay habka ay u bedesho dariiqayada, siyaasadaha, iyo habraacyadayada si ay nooga caawiso ku habboonaanta nidaamka daryeelka caafimaadka Hindiya, halkii ay ka filan lahayd bixiyayaashayada qabiilka inay noo beddelaan nidaamkooda.
CHPW waxay hadda si dhow ula shaqaynaysaa Maamulka Daryeelka Caafimaadka Washington (HCA) si ay wax uga qabato shuruudaha qandaraaska ee keenaya caqabadaha xubnaha Hindida Maraykanka iyo Dhaladka Alaska si ay u helaan adeegyada daryeelka gaarka ah. Waxaan ku kalsoonahay in isbedel loo baahan yahay la samayn doono, lana ilaalin doono qarannimada qabiilka.
A Ururka daryeelka la maareeyey (MCO) waa nooc ka mid ah qorshaha caafimaadka. MCO-yadu waxay diiradda saaraan bixinta faa'iidooyinka iyo adeegyada qiimo jaban, tayo sare leh, oo si habboon loo isticmaalo (aan aad u badnayn ama aad u yar).
Qaranimada qabiil waxaa loola jeedaa awoodda ay qabaa'ilka asaliga ah u leeyihiin is-maamul. Xubnaha ka diiwaangashan qabaa'ilka AI/AN waxay leeyihiin xuquuq gaar ah oo ka socota Maraykanka - oo ay ku jirto xaqa daryeelka caafimaadka - oo ku salaysan heshiisyada lala galay dawladdooda qabiil.
Waa maxay shay aad dhawaan baratay ama ku guulaysatay oo aad ku faanayso?
Marna ma rabo inaan joojiyo waxbarashada. Haddii aad joojiso waxbarashada, waxaad joojisaa koritaanka. Waxaan la kulmay dadkaas… kuma faraxsana!
Hadda waxaan ka shaqaynayaa inaan noqdo Master Angler. Si tan loo sameeyo gudaha Washington waxay u baahan tahay in la soo qabto kalluun heer gobol ah oo diiwaangashan. Marka qabsashada si rasmi ah loo diiwaangeliyo, waxaad markaa qaadi kartaa magaca Master ee nooca kalluunka. Waxaan u socdaa dhowr cinwaan!
Markaan dibadda uga bixin kalluunku iga cabsado, waxaan bilaabay xiisado aan ku barto luqaddayda Cherokee.
Waa maxay xilliga aad ugu jeceshahay Waqooyiga-galbeed ee Baasifiga iyo sababta?
Waxaan ku noolahay Basin Columbia, oo ku dhow bartamaha gobolka, waxaanan la kulannaa isbeddello xilliyeedka oo aad u qurux badan oo xiiso leh. Xilliga aan jeclahay waa gu'ga… marka xilliga kalluumeysiga uu furmo!
Fursadaha shaqada ee CHPW
Daboolista Caafimaadka Qabiilka ee CHPW
Komishanka Caafimaadka Hindida Maraykanka ee Gobolka Washington
« Soo dejinta Sonkorowga: Sidee Tech u caawin kartaa
Tijaabada COVID-guriga-guriga: 5-ta Su'aalood ee ugu sarreeya ayaa laga jawaabay »